Tanya Nchekwa onwe V: tụnyere n'etiti PS4 na PS3 | Akụkọ akụrụngwa
Nnukwu ohi Nchekwa onwe V: tụnyere n'etiti PS4 na PS3
Ọbịbịa nke Nnukwu ohi Nchekwa onwe V na PlayStation 4, Xbox One na PC agaghị adị mfe ịtọhapụ egwuregwu ahụ site na otu afọ gara aga: Rockstar ejiriwo ohere na ike nke nyiwe ndị a iji melite akụkụ ọ bụla nke egwuregwu ahụ. . Na mgbakwunye na ụdị mmadụ izizi ekpughererịrị, anyị ga-enwe nnukwu mgbanwe ọrụaka, dị ka mmụba na mkpebi zuru ụwa ọnụ - edegharịrị ederede ọ bụla - yana ihe karịrị okpukpu abụọ nke ịbịaru.
Iji kwụghachi ndị na-eguzosi ike n'ihe ụgwọ maka ịkwaga na nke ọhụrụ nke Los Santos na Blaine County, e mepụtara ọtụtụ ihe dị iche iche maka ndị egwuregwu a, nke ọ bụla metụtara ọrụ e mere iji nyere ha aka ịnweta oke ụwa nke egwuregwu na ọhụrụ na ụzọ na-atọ ụtọ. Mgbe ịwụchara, ịnwere ụfọdụ ihe ọhụrụ na mmemme ndị ga-adị maka ndị egwuregwu a.
Anyị na-ahapụ gị ozi zuru oke na nke zuru ezu Rockstar nyere site na nkwupụta banyere ọdịnaya naanị:
El dodo seaplane- O nwere ike iwe ntakịrị ike iji wepụ ihe GTA kpochapụwo.
Ihe omume ọhụụ na ụgwọ ọrụ
Chọpụta ihe ọhụụ na - eme na gburugburu ụwa ma mezue nsogbu ndị ha na - eweta iji kpughee ụgbọ ala ọhụrụ dịka Imponte Duke O'Death na nnụnụ ahụ mara mma nke ikuku na GTA, ụgbọ mmiri Dodo.
The Imponte Duke O'Death- Dịka ị nwere ike ịtụ anya, na oge izizi ị sụrụ ngọngọ na igwe igwe ọgbaghara a, enwere nnukwu nsogbu. Jiri isi gị dozie ha ma ịma mma a ga-abụ nke gị.
Oké igbu ọchụ
Dika Michael, gbasoo uzo ihe omimi iji kọwaa ihe ojoo ojoo. Na-etinye iberibe ọnụ na ị ga unlock kpọghee ekwt abụọ Movie Noir-ịke nzacha, na-enye Akụkọ Mode egwuregwu na Snapmatic foto grainy anya nke ochie-ụlọ akwụkwọ mpụ ochie.
Ngwá agha: égbè akpa akpa na anyụike
Jiri égbè electromagnetic nke ike dị ukwuu na ọsọ ọsọ kụtuo ndị na-emegide gị. Ngwa agha ndị agha a nke nwere ngwa ọgụ nke aka ya na ụlọ ahịa Ammu-Nation dị na mpaghara gị. Ma ọ bụ gbue ndị iro nso na iji anyụike.
Ihe ịma aka nke anụ ọhịa
E nwere ụdị anụmanụ dị iche iche na Los Santos na Blaine County, yana LS Tourist Office chọrọ onye ga-edekọ ha. Dị ka Franklin, katalọgụ ụdị pụrụ iche gbasasịa gafee map ị kpọghee aha pụrụ iche Kraken obere.
Gba ụgbọ ala Serial
Mmeri agbụrụ nke ụgbọ ala ụgbọ ala ọhụụ iji nweta ụgbọ ala ịgba ọsọ pụrụ iche nke ejiri akara ngosi nke ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-eme obodo a.
Onye omenkà n'okporo ámá dị omimi na-ese ihe mgbidi na obodo niile site na silhouettes. Chọta ha niile ka ha merie ọhụụ ọhụụ (enwere ndị egwuregwu niile) yana naanị Go Go Space Monkey Blista maka ndị egwuregwu mgbe niile.
Vehiclesgbọala ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Kụtuo okporo ụzọ ndị dị na Los Santos (yana onye ọ bụla nọ n'ụzọ gị) ya na gwongworo ogologo anụ Cheval Marshall ma buru ụzọ dị egwu, nke nwere ike ịkpụgharị, site n'ikike nke Xero Gas.
A ga-enwekwa ọdịnaya dị ọhụrụ maka ndị egwuregwu niile, nke ọhụụ na nke ọhụụ, ịchọpụta, gụnyere a nsoro nke ugbo ala GTA kpochapuru na ihe ijuanya ole na ole na anyị akwadoro gị ka ị chọpụta n’onwe gị ụbọchị egwuregwu ahụ ga-apụta. Na, dị ka anyị kwurula na mbụ, Ndị egwuregwu GTA dị ugbu a na PS3 na Xbox 360 ga-enwe ike ịga n'ihu n'egwuregwu ha site na ịnyefe ihe odide ha na ọganihu ha n'enweghị nsogbu ọ bụla na ikpo okwu nke nhọrọ ha, ma ọ bụ PlayStation 4, Xbox One ma ọ bụ PC (Ọ dị mkpa isonye na Social Club) Na mgbakwunye, onye ọ bụla nwere debere egwuregwu ahụ ị ga-enweta a GTA $ 1 nde ego ($ 500 maka otu onye egwu na $ 000 maka izu ohi na ntanetị)
Cheta na Tanya Nchekwa onwe V nke na-esote ga-abịa 18 maka November a PlayStation 4 y Xbox One, mgbe mbipute nke PC na-atụ anya na njedebe nke Jenụwarị ọzọ 2015.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nnukwu ohi Nchekwa onwe V: tụnyere n'etiti PS4 na PS3
Anyị nwalere elekere TomTom Runner Cardio
Oku ọrụ: Advanced Warfare multiplayer review